I-Semalt iphakamisa izindlela zokubika ukukhwabanisa kwe-inthanethi nokukhwabanisa
Abanikazi abaningi besayithi nabathuthukisi baye babhekana nemizamo yokukhwabanisa kanye nezikhwama ezisekelwe e-intanethi.Okumangalisa ukuthi iningi lalabo abahlukunyezwayo alisho lutho. Ngokuvamile, izisulu zinamahloni ngokuzihlambalaza noma ngisho nokulahlekelwa ithemba.Kulokhu, kubaluleke kakhulu ukubika ukukhwabanisa kwe-intanethi nokukhwabanisa ukuvimbela izigebengu ze-intanethi ekuhlaseleni amanye amasayithi noma abantu. Enyekumele abe nomoya wokulwa. Ukwengeza, kunezinhlangano eziningi ezizimisele ukusiza izisulu. Ubugebengu obwenziwe ngei-intanethi iphinde ijeziswe.
Ngakho, umsebenzisi we-intanethi, umnikazi wesayithi noma unjiniyela angabika kanjani ukukhwabanisa noma ukukhwabanisa?Yiziphi ezinye zezinsiza zokuqapha / ukukhwabanisa okukhona? Thola kule ncwadi ebhalwe ngu-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt .
Ukukhwabanisa ku-intanethi / ukubika ukukhwabanisa.
Isikhungo se-Inthanethi se-Crime Crime Complaint (ICCC) yisisetshenziswa sokuqala esisebenzisekayo. Lokhuukusebenzisana phakathi kweNational White Collar Crime Centre kanye ne-United States Federal Bureau of Investigations. Ngokusho kwe-intanethiochwepheshe, i-ICCC iphakathi kwamapulatifomu amahle kakhulu okubika ukukhwabanisa okukhulu okubandakanya ukukhwabanisa (noma ukufakwa kwekhompiyutha), ukwebiwa kwezohweboIzimfihlo (Espionage Economic), ukweba ubunikazi nezinye izivikelo ezinkulu ze-Cyber. Noma kunjalo, umuntu angakwazi ukubika noma yibuphi ubugebengu obungaqondileawele ezigabeni ezinjalo ngisho noma bezwa ukuthi ubugebengu obuzibophezelekile buyingcosana..Ngaphezu kwalokho, uma ubugebengu bengangeni ngaphansi kwezigaba ze-ICCC,inhlangano ingaqondisa isisulu ejensi elifanele. Ngakho, i-ICCC iyi-platform evula iminyango yazo zonke izisulu zokuhlambalaza ku-inthanethi nokukhwabanisa.
Okwesibini, i-Online Business Business Bureau yase-US neCanada inikeza iwebhusayithikumakhasimende asiza izisulu zokuhlaselwa kocansi ekubikeni izikhalo eziphathelene nabathengisi base-intanethi kanye nabanye abakhohlisi. Ukwengeza, izisulu zokukhwabanisaungaphinda ufune idatha yalolu daba ukuze uqinisekise ukuthi umthengisi othile unamanye izikhalazo ezifakwe kuzo. Futhi,izikhalazo ziyakhuthazwa ukuba zenze ukulandelwa futhi ziqume uma izikhalazo eziphathelene nomdayisi we-inthanethi zixazululwe.
Okwesithathu, isayithi le-Inthanethi leHhovisi LamaFayili YokuThuthukiswa kwe-Inthanethi linyeindlela yokudlulisa ubugebengu be-intanethi. Ipulatifomu ihambelana kahle nezikhalo ezifana nokuhlaselwa kwe-phishing, i-scam ema-imeyili, izikhalazo zabathengi ukuthiukukhathazeka ngokukhangisa kwe-intanethi nokukhwabanisa kwe-intanethi. Isayithi libuye linikeze izixhumanisi kuma-ejenti afanelekayo aphatha ukubika kwe-scam auhlobo oluthile lobugebengu obuku-intanethi.
Okulandelayo, i-Craigslist inekhasi elinikezelwe ekuvimbeleni ukukhwabanisa ngokungeziweukuhlinzeka ngolwazi mayelana nezinqubo zokubika uma kwenzeka umuntu ephangwa ngamalungu we-Craigslist. Ukwaziswa okwengeziwe kuyatholakalaIwebhusayithi ye-Craigslist yendlela yokubhekana nokukhwabanisa noma kunini lapho ivela khona.
Isikhungo sokuphepha se-eBay yisinye isiteji se-General Marketplace Safety. Itkusiza ukuhlwitha izisulu ngokukhwabanisa okuhlobene nokuthengiswa kwe-auction nokukhwabanisa eziphathimandla ezifanele. Ngaphezu kwalokho, i-eBay Security Center inikezaukusetshenziselwa komthetho kwamasu okuqamba uma umenzi we-scammer ezama ukuthengiswa kwezinto ezibiwe endalini. Lesi sici sibaluleke kakhulukulabo abahlukunyezwa ukwebiwa kwempahla.
Ekugcineni, ikhasi le-Facebook Security livumela isisulu sokuhlukunyezwa ukuthi sikhombise ukukhwabanisa, sinamandlaizicelo, i-akhawunti hacks, ugaxekile nanoma yikuphi ukuhlaselwa okuhlobene ne-Facebook. Ungabi namahloni. Bika ukukhwabanisa ukuvimbela izingozi ezizayo.